Xiaomi 10W MAX famerenana tsy misy tariby | Vidiny sy fiasa | Androidsis
Fanadihadiana charger tsy misy tariby Xiaomi 10W MAX
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Fitaovana hafa, hevitra
Tamin'ity herinandro ity dia tsy maintsy nanandrana a izahay Vokatra Xiaomi, ary fitsaboana foana izany. Araka ny fantatsika, ny orinasa sinoa dia malaza amin'ny famokarana fitaovana kalitao. Ary tamin'ity indray mitoraka ity dia napetrakay ny Charger tsy misy tariby Xiaomi 10W MAX. Charger tsy misy tariby nandrasana hatry ny ela izay mitondra zava-baovao.
Tonga saina teny an-tsena ireo mpamily tsy misy tariby. Indrindra satria vitsy dia vitsy ny finday avo lenta fampiasa amin'ny haitao afaka mampiasa azy ireo. Hitantsika izao mihabe hatrany ny telefaona manohana ny famandrihana finday. Noho izany, nitodika ireo orinasa hamokatra azy ireo. Ary mazava ho azy, Xiaomi dia tsy afaka ho ambany.
Te hanana charger tsy misy tariby haingana indrindra amin'ny fihenam-bidy tsara indrindra? Tsindrio eto ary mividiana azy amin'ny € 19,99 amin'ny alàlan'ny kaody SP0054 fotsiny. Plus misy vidiny fandefasana maimaim-poana! Tolotra iray manan-kery raha tsy amin'ny 30 Novambra 2018.
1 Xiaomi 10W MAX ny charger tsy misy tariby haingana sy mora vidy
2 Ahoana ny charger Xiaomi 10W MAX?
3 Ny Xiaomi 10W MAX dia azo antoka
4 Fanampiny izay mahatonga azy io ho tsara kokoa noho ny ambiny
5 Tombontsoa sy fatiantoka ny Xiaomi 10W MAX Wireless Charger
Xiaomi 10W MAX ny charger tsy misy tariby haingana sy mora vidy
amin'izao fotoana izao manana sokajy samihafa izahay amin'ny resaka hafainganam-pandeha Wireless. Tsy ny charger rehetra no mety amin'ny smartphone rehetra. Ary tsy ny smartphone rehetra no azo ampangaina amin'ny charger fotsiny. Zavatra antenainay fa hitambatra tanteraka rehefa mandeha ny fotoana mba ho mora kokoa ny mahita ny charger mety.
Ny terminal voalohany misy famahanana tsy misy tariby hitifitra ny tsena dia mahatratra 5 watt. Misy ny terminal hafa misy ankehitriny izany dia efa manana ilay antsoina hoe «wireless fast charge», izay mahatratra 7,5 watts. Ary mazava ho azy, ny famoahana farany tamin'ity taona ity dia efa manana izy ireo Famandrihana haingana tsy misy tariby 10 watt.
Xiaomi dia nanavao ny karazana charger tsy misy tariby miaraka amin'ity vaovao ity 10W MAX. Ary manolotra fitaovana mifanaraka amin'ny maodely farany Avy amin'ny tsena. Miaraka amin'ny charger 10 watt dia azo atao ny mandidy, ohatra, ny maodely Samsung farany, toa ny ny S9 na ny Note 9. Miaraka amin'ity charger tsy misy tariby ity dia tsy ho fohy ianao amin'ny fotoana rehetra ary Ankehitriny dia mety ho anao ny latsaky ny € 15.
Mba hividianana ny charger amin'ny vidiny tsara indrindra dia tadidio fa mila izany ianao midira eto y mampiasa kaody promo SP0054 izay hisy hatramin'ny 30 Novambra 2018.
Ahoana ny charger Xiaomi 10W MAX?
Tsy azontsika lazaina ara-batana momba ny charger tsy misy tariby minimalist toy izany. Tsy misy zavatra betsaka holazaina mihoatra ny loko, ny fitaovany sy ny mpampifandray azy. ny ny tapany ambony dia vita amin'ny silipo tsy mihetsika miaraka amin'ny famaranana tena mahafinaritra ny mikasika. Ao afovoany, miavaka ny marika Mi, tsy isalasalana fa mitovy amin'ny kalitao. Ao amin'ny ambany encontramos metaly voatsabo amin'ny endrika manga manga manome azy io tena mahaliana. Ny vy mitoetra eo amin'ny boribory fingotra ka milamina ny fanohanany ary tsy mihetsika.
Eo aloha dia misy litera kely loko maitso nitarika hazavana izay milaza amintsika rehefa mifandray sy miasa izy io. Ary ao amin'ny azy aoriana hitanay ny Connector USB Type C mampifandray azy amin'ny loharano lehibe. Fitaovana tsotra izay tsy misy miavaka fa manome famaranana tena tsara sy endrika manintona sy kanto.
Ny Xiaomi 10W MAX dia azo antoka
Ny Xiaomi 10W MAX Wireless Charger dia mpandraharaha azo antoka. Tsy tokony hatahotra isika satria mety hiteraka karazana tranga izany. Tao Xiaomi dia nomen'izy ireo tamim-pitandremana ity fitaovana ity izay ilaina rehetra hanatanterahana izany. Volavolan-dalàna miaraka amin'ny fiarovana zavatra vahiny vy, Ka raha mahita vola madinika, na lakile izy, dia mety hiteraka lalan-kely mamono ho azy ny tenany.
ihany koa hovonoina ho azy izy io raha mahita ny fiakaran'ny maripana tsy ao anaty soso-kevitra izany. Raha ny lozisialy no mahatonga ny fanafanana dia ny rafitrao mifehy ny haavon'ny haavony sy ny heriny hamerina ny maripana amin'ny haavon'ny optimum. Araka izany, ho voafehy ny zava-drehetra raha misy overheating ny fitaovana na ny charger.
Fanampiny izay mahatonga azy io ho tsara kokoa noho ny ambiny
Ny iray amin'ireo fahasahiranana ahafahana mameno telefaona amin'ny charger tsy misy tariby dia ny telefaona mihintsy dia tsy maintsy mifandray amin'ilay iray voampanga. Araka izany, Hatramin'izao dia tsy maintsy nesorinay ny tranga na ny trano fonenan'ilay finday avo lenta hahafahanay maka izany. Zavatra iray izay nanjary fanelingelenana tokoa satria tsy maintsy nataontsika isan'andro.
tsara tsy ilaina intsony izany miaraka amin'ny charger Wireless Xiaomi vaovao. Iray amin'ireo fanampim-panazavana andrasana indrindra izay omen'ity charger ity dia iray amin'ireo fangatahana lehibe indrindra hatramin'ny nahatongavan'izy ireo tamin'ny tsena. Farany azontsika atao ny mandray vola amin'ny finday mifanaraka amin'ny famandrihana tsy misy tariby miaraka amin'ny fonony.
Ny charger Xiaomi 10W MAX dia mamela ny famandrihana tsy misy tariby hatramin'ny halavirana 4mm. Izany hoe, saika misy tranga na akorandriaka eny an-tsena. Tsy misy isalasalana fa fandrosoana manan-danja izay mahatonga ny charger tsy misy tariby ahazoana aina araka ny tokony ho izy hatramin'ny voalohany. Eto ianao dia afaka mividy ny Xiaomi 1oW MAX amin'ny vidiny tsara indrindra.
Tombontsoa sy fatiantoka ny Xiaomi 10W MAX Wireless Charger
ny fanamboarana fitaovana Toa mety tsara izy ireo, tsy misy silipo tsy mihetsika eo an-tampony, ary vy mainty eo ambany. Azo antoka fa iray safidy tsara izay mitambatra mahatalanjona hanolotra vokatra iray miaraka amina famaranana tena tsara.
Su habe sy hateviny tena voafehy tokoa izy ireo, zavatra iray izay mahavita be azy io mahazo aina kokoa. Tafiditra ao anaty paosy rehetra ary kely fotsiny ny lanjany.
Manaiky izany ny entana hatramin'ny 10 watteny, ary avelao izany mifanaraka amin'ny farany Ny fandefasana tsena dia mahatonga azy io ho iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ny tsena.
Su vidiny manintona iray hafa manan-danja ihany koa. Vato famaranana haingana, marobe ary manintona ara-batana no tena betsaka amin'ny vidiny lafo.
Fitaovana sy famaranana
Mavesatra sy refy
Mifanaraka amin'ny "top" farany
Tsy manana mpampifandray amin'ny tambajotra elektrika izy io. Tsy isalasalana fa teboka ratsy io satria ilaintsika ny solosaina na loharano USB ahafahana mampiasa azy. Toa tsy lozika ho antsika fa ny charger dia miaraka amin'ny tariby USB ihany. Teboka ratsy
Ankoatra izany, Tariby USB Type-C izay tonga ao anaty boaty no mivadika fohy loatra. Mba hametrahana azy eo amin'ny latabatra mifandray amin'ny solosaina dia tsy misy olana. Saingy raha te-hamidy azy amin'ny toerana hafa isika miaraka amin'ny plug kely lavitra, dia ho sarotra ny asa amin'ny tariby fohy toy izany.
Tsy manana ny mpampitohy amin'ny rindrina izy io
Fohy loatra ny tariby USB
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Fanadihadiana charger tsy misy tariby Xiaomi 10W MAX
Google dia handidy ny mpanamboatra hampiasa ny fampiharana Android
Ahoana ny fomba ahafahan'ny debugging USB amin'ny findainao Android